Rastriya Banijya Bank Limited(Rastriya Banijya Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ। बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रमअन्तर्गत युवा उद्यमी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ। हिजो शनिबार एक कार्यक्रमका बीच अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयका सचिव डा....
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजार उकालो गतितिर अगाडि बढिरहेको छ। सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको सेयर बजारमा अहिले पुराना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरु धमाधम पैसा खन्याइरहेका छन्। कोरोनाका कारण लगानीका अन्य क्षेत्रमा खासै प्रतिफल प्राप्त नभइरहेकै बेला सेयरमा लगानी बढ्दै गइरहेको छ। यतिबेला बैंकहरुले पनि सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर...
अध्यक्ष नबनाएपछि रा.वा. बैंक सञ्चालकबाट कोइरालाको राजीनामा
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिबाट उपेन्द्रकुमार कोइरालाले बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। वाणिज्य बैंकको हिजो बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। गत भदौमा कोइरालालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाउने गरी नियुक्त गरिएको थियो। तर...
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि मिस नेपाल वर्ल्ड–२०२० नम्रता श्रेष्ठलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्ति गरिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दी हिँडन ट्रेजर प्रालिबीच भएको सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र दी हिडन ट्रेजर...
रा.वा. बैंक र नेपाल बैंकले कुल रु. ६ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बोर्डसँग मागे अनुमति
काठमाण्डौ । दुई वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका हुन्। यी दुवै बैंकले कुल ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले...
डिजिटल बैंकिङ सुरक्षित नेटवर्कबाट मात्रै प्रयोग गर्न रा.वा. बैंकको सुझाव
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण हिजोआज मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। किनमेलदेखि लिएर अधिकांश भुक्तानीको माध्यममा मोबाइल बैंकिङले सहजता ल्याएको छ। तर आफूले प्रयोग गर्ने नेटवर्क कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नु जरुरी भइसकेको छ। आमउपभोक्ता भने मोबाइल नेटवर्कमा डेटा महँगो पर्ने भएर सार्वजनिक...